★မြန်မာ့အလင်း★: စာရွက်ပေါ်က စကားလုံးလှလေးတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ စကားလုံးလှလှလေးတွေ ပြောတတ်ဖို့ထက် တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကိုလည်း လက်ခံစဉ်းစားရဲတဲ့ သတ္တိုရှိရပါမယ်။ သမိုင်းကို ကြည့်ပါဦးဗျာ . . . . တချိန်တုံးက ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်တွေ ခေတ်စားခဲ့တယ် မဟုတ်ပါလား။ ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်အတွက် အသေခံခဲ့တဲ့ မိုက်ရူးရဲတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစံနစ်ကြီးဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀လောက်ပဲ ခံခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဆိုရှယ်လစ်ကို ထောက်ခံရင် လူဆိုးကြီးလို့တောင် အပြောခံရတဲ့ အဆင့်အထိပါပဲ။ ဗြောင်းပြန်ကြီးကို ဖြစ်သွားတယ်နော်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလဲ ခေတ်နဲ့အမှီ ဒီမိုကရေစီကို တောင်းဆိုနေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်ထူထူကြီးတွေကို ဖတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီလိုချင်တာထက် . . . . ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တကယ်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ လေ့လာစဉ်းစားပြီးမှသာ လက်ခံသင့်ပါတယ်။ အပြစ်အနာအဆာတွေ့ရင် ဘယ်လိုပြုပြင်သင့်လဲဆိုတာ ကြံစရပါမယ်။ နောင်တချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်လည်း ဆိုရှယ်လစ်လိုပဲ ပျောက်ကွယ်သွား နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြပါ။
ကဲ. . . . . မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ (နအဖ၊ဒီမို၊တတိယလူ) ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ဝေဖန်စမ်းစစ် ကြည့်ပြီးပြီလား? လူအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေမှာ သာယာနေရင် နိုင်ငံရေးသမား မလုပ်သင့်ဘူး။ ကဗျာတွေ ၀ထ္ထူတွေပဲ ဖတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေသင့်တယ်။ (မွတ်ဆလင်တွေကို လူစာရင်းမှာထည့်မထားလို့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မှာ ဒင်းတို့မပါဘူးဆိုတာ ရှင်းဖို့လိုသေးလား?) တကယ်တော့ မြန်မာတွေ အထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေက အဖြူတွေလည်း စကားလုံးလှလှလေးတွေကနေ မထွက်နိုင်ရှာပါဘူး။
ဒီဗီဒီယို Linkလေးကို Click လုပ်ပြီး ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုမှာ ပထမပိုင်းမှာ pc-cillin software ကြော်ငြာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတင်ပြတဲ့ ပုံစံနဲ့အခုလို အချိန်ရှည်တဲ့ ကြော်ငြာမျိုးကို တွေ့ဖူးမယ်မထင်ပါဘူး။ ညပိုင်းသန်းခေါင်ကျော်တဲ့အချိန် ကြော်ငြာခသက်သာတဲ့အခါမှာ ပြသတဲ့ ကြော်ငြာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကုမဏီတွေကနေ ဖြန့်ဝေတဲ့ DVD တွေမှာလည်း အခုကြော်ငြာမျိုးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြော်ငြာကိုပဲ Fox သတင်းဌာနက သူရဲ့ တံဆိပ်တပ်ပြီး သတင်းသဖွယ်ထုတ်လွှင့်ပေးတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကြော်ငြာကို သတင်းဖြစ်အောင် ထုတ်လွှင့်တာ အရမ်းလွန်တာပေါ့ဗျာ။ တချို့က FOX သတင်းဌာတစ်ခုကပဲ အခုလိုလုပ်တာမို့ ပြဿနာကို မရှိဘူးလို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ (MSNBC သတင်းတုဗီဒီယို ) ဒီမိုသတင်းဌာနတွေဟာ ငွေယူပြီး သတင်းအတုတွေ ထုတ်လွှင့်တာ အစဉ်အလာတစ်ခုပါ။ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း သတင်းအတုကို အသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်းကြောငြာရတာ ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုမီဒီယာတွေကို ပိုက်ပိုက်ပေးပြီး ကြော်ငြာကို သတင်းအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို PR Watchမှာ လေ့လာကြည့်ရင် ပိုပြီးသိလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက FOX ဟာကုမဏီမဟုတ်ပါဘူး။ ဧရာမ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးဖြစ်တဲ့ News Corporation ကြီး ရဲ့ တံဆိပ်ခွဲတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ News Corporation ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုရင် ကမ္ဘာအနှံ့မှာ မီဒီယာ တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တံဆိပ်နာမည်တွေက သိပ်များလွန်းတော့ ဒီမှာ Clickလုပ်ပြီး မိမိဖာသာ ကြည့်ရှုပါတော့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ The Daily Telegraph , The Sunday Times , The Wall Street Journal , The New York Post တို့သာမကပါဘူး Fiji နဲ့ Papua New Guinea တို့လို နိုင်ငံသေးသေးလေးမှာရှိတဲ့ သတင်းစာတွေကိုပါ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ News Corporation ဟာ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးခွဲပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးစုံနဲ့ ငွေတွေကို ရှာဖွေနေတာပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင် လိမ်ညာပြီး သတင်းတွေ ရေးပေးနေရင် ငွေများများပေးနိုင်တဲ့ ဒီမိုအစိုးရတွေအတွက် ဘယ်လောက် လိမ်ညာပေးမလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
အခုလို ဒီမိုမီဒီယာတွေ မသမာမှုကို အထောက်အထားနဲ့ တင်ပြတော့ ဒီမိုသမားတွေက ဒေါသထွက်နေမှာပါ။ နအဖလူတွေက ဒီမိုမီဒီယာတွေကို တိုက်ခိုက်လို့ဆိုပြီး ၀မ်းသာနေပါလိမ့်မယ်။ တတိယလူတွေကတော့ ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးမှာ စကားလုံးလှလှလေးတွေ သုံးမထားတော့ စိတ်ဝင်စားမယ် မထင်ပါဘူး။ ကလေးဆန်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဖျောက်ပါတော့။ ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြရအောင်။ ကျုပ်တို့တင်ပြချက်ဟာ လက်တွေ့ကျရဲ့လားဆိုတာ မိမိဖာသာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ၊ ငါ၊ ငါ၊ ငါ နှင့် I , I , I , I
တံဆိပ်ကြည့်ပြီး အကောင်းအဆိုးခွဲခြားနေတဲ့ လူတွေကတော့ FOX သတင်းဌာနဲ့ News Corporation ကိုသာ အပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ စောက်တင်းပြော၊ စောက်ပြစ် တင်ရတာဝါသနာပါရင် ခဏလေးအောင့်ထားပါ။ ပထမဆုံး အခြေအနေတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ . . . အရင်းရှင်စံနစ်မှာ စည်းစိမ်ချမ်းသာမှ လူရာသွင်းကျပါတယ်။ သူဌေးကြီးတွေကို သူရဲကောင်းကြီးများသဖွယ် ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်နေကြတာ သတိထားမိမှာပါ။ ဘယ်သူမဆို အသိအမှတ်ပြုပြီး မြှောက်စားတာကို မက်မောတာချည်းပါပဲ။ ဒီတော့ ချမ်းသာဖို့ပဲ ကြိုးစားကျတာပေါ့။ ရိုးသားတဲ့နည်း / မရိုးသားတဲ့နည်း ရှိသမျှ နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ချမ်းသာအောင် လုပ်ကြပါတယ်။ အခွန်ငွေကို ရှောင်ကြပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို လိမ်ညာပြီးရောင်းတယ်။ အလုပ်သမားတွေအပေါ် လုပ်အားခ နှိမ်ပေးတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ သူတွေကတော့ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ကျတာပေါ့ဗျာ။ CIA ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ သမ္မတကလင်တန်ဆိုရင် မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုမှုမှာ ပတ်သက်နေပါတယ်။ မာဖီးယားနှင့် ရာကူဇာတွေ လုပ်နေတာ ချမ်းသာချင်လို့လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါလား? ဆရာဝန်တွေကလဲ လူနာတွေ ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ထက် ငွေရဖို့ပဲ အလေးထားပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ စက်ကို တာရှည်ခံဖို့ထက် အရောင်းသွက်အောင်လုပ်ပြီး မြန်မြန်ပျက်အောင် လုပ်ထားတယ်။ (မြန်မြန်ပျက်တော့ များများရောင်းရတာပေါ့)။ ဒီမိုမီဒီယာတွေလဲ အများတကာလို ချမ်းသာချင်တော့ နိုင်ငံရေးသမား၊ စီးပွားရေးသမားတွေဆီက ငွေယူပြီး သတင်းတုတွေ ထုတ်လွှင့်တာပေါ့။ လူတွေအားလုံးက မတရားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ချမ်းသာအောင်လုပ်နေတာ ဘာကြောင့် ဒီမိုမီဒီယာတွေကိုပဲ ကွက်ပြီး အပြစ်တင်ချင်ရတာလဲ? အဲဒါမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါ့မလား?
ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ကိုကြည့်ရင် အားလုံးဟာ ရုပ်ဝထ္ထူတွေကိုပဲ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ လိမ်ညာလှည့်ဖျားပြီး လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလဲ ပေါများနေပါတယ်။ တခြားလူတွေလိုပဲ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေလဲ ကြီးပွားချင်တော့ ဘာလုပ်ရမလဲ? ၀န်ထမ်းဆိုတော့ လဒ်စားရမှာပေါ့။ လဒ်စားလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ တိုက်ဆောက် ကားစီးနေကြပါပြီ။ လဒ်စားတဲ့ပြဿနာဟာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးရွားလာတယ်လို့ လူကြီးတွေက ဆိုကြပါတယ်။ အရင်ကလည်း လဒ်စားတာတွေရှိပေမယ့် အခုလောက်အထိ မဆိုးဝါးဘူးတဲ့။ အရင်းရှင်စံနစ်ကို ပြောင်းလဲပြီးမှ ဆိုးရွားခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကြီးဟာ . . . . ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေ ပေါများလာသလို လိမ်ညာလှည့်ပတ်မှုတွေလဲ တိုးပွားနေပါတယ်။ တဦးနဲ့ တဦး ရိုင်းပင်းကူညီမှုတွေ တနေ့တခြား နည်းပါးလာပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာကို ခင်မင်မှုတွေ နည်းပါးလာပါပြီ။ ပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ “လောဘ” ဆိုတာကို မြင်သာပါတယ်။ လောဘကြောင့် လူစိတ်တွေ ပျောက်ကုန်ပြီး မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ကုန်ကြတာပေါ့။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း လုပ်နိုင်ရင်တော့ တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် ၊ ဝေဖန်ခွင့်ဆိုတာ အင်မတန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိစိတ်ကြိုက် ခေါင်းဆောင်ကို ၄ နှစ်တခါ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာ? ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သူနာပြု၊ ကျောင်းသား၊ ဈေးသည်၊ အလုပ်သမားတွေကတော့ လောဘတွေ ကြီးချင်တိုင်းကြီးပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတော့ သူတော်စင်တွေ ဖြစ်စေချင်လို့မရပါဘူးဗျ။ အတ္တကြီးတဲ့ လူ့ဘောင်ထဲက နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း အတ္တသမားတွေပဲ ဖြစ်မှာပေါ။့ သူတို့တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့ မသမာတဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပါလိမ့်မယ်။ မီဒီယာတွေနဲ့ လက်ဝါးရိုက်ပြီး လူတွေကို လှည့်ဖျားပါလိမ့်မယ်။ မိမိကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကို နည်မျိုးစုံသုံးပြီး ချေမုံန်းပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ကိုလဲ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ ပိတ်ပင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လူ့ဘောင်ကြီးအတွင်းမှာ “လောဘ” လျှော့ချပြီး အကျင့်စာရိတ္တကို မြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့ အင်မတန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
It is true!THANKS!!!!!